Trump oo si daran u canaantay nin u shaqeeya oo ku ag qufacay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka ABC News
Image caption Waraysigii uu Trump bixiyay
Waraysiga waxa uu ka dhacayay xafiiska gaarka ah ee Trump ee loo yaqaano Oval Office, wuxuuna yiri Trump "Orod meelahaas ku qufac, waa uu qufacayaa aniga oo bartanka kaga jira in aan ka jawaabo su'aal, ma jecli taas, waad ogtahay, ma jecli".
"Haddii aad qufacayso qol kale la aad, qolkana ka bax,ma qufici kartid" ayuu sii raaciyay isaga oo ku hadlaya cod sare oo canaan ah.
Arrintan ayaa dhacday xilli uu madaxweynaha ka jawaabayay su'aal ku saabsanayd waxqabadkiisa xagga kobaca dhaqaalaha.
Arrin kale oo xusid mudan intii uu waraysiga socday ayaa ahayd su'aal uu ka jawaabay oo ku saabsan waxa loo yaqaano Suxuunta Duusha.
Markii uu wariyaha weeydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in duuliyeyaasha ciidamada cirka Maraykanka ay arkeen suxuunta duusha, ayuu Trump gilgishay , islamarkaasna dhoola cadeeyay, wuxuuna yiri "Waa ar kaan, ana waan arkay, waanan maqlay, waanan akhriyay, dadkuna waxay yiraahdaan waxaan aragnaa Suxuunta Duusha ama UFOs waxa loo yaqaano".
Suxuunta duusha ayaa ah waxyaabo mala awaal ah oo la sheegay in ay hawada duulaan, aanan la aqoonin uunka wada, balse la'isku waafaqsanyahay in ay yihiin uun aan bini'aadam ahayn.